Hedzino Nhanhatu Nzira Idzo Nhare mbozha Dzinobatsira muBhizimusi Kukura | Martech Zone
Sezvo mafoni emuno masisitimu anoderedza nguva yekusimudzira uye kudzikisira pasi mari yekuvandudza, kunyorera nhare kuri kuve kunofanirwa-kuve nekambani zhinji kutyaira hunyanzvi. Kuvaka yako pachako nharembozha haina kana kudhura uye isinganetsi sezvo zvaingova makore mashoma apfuura.
Kuita kuti indasitiri iyi ive makambani ekuvandudza mapurogiramu ane hunyanzvi hwakasiyana nzvimbo uye zvitupa, zvese zvine hukasha mukuvaka zvikumbiro zvebhizinesi zvinogona kukanganisa zvese zvebhizinesi rako.
Maitiro Ema mobile Apps Anogona Kukura Bhizinesi Rako
Wedzera Yako Vatengi Base - Iwe hauzomboziva kana chako chemuno chigadzirwa kana sevhisi inozoshanduka rova ​​kune iri kure nyika. Anoshamisa nharembozha chitoro app, yakaderedzwa mbozhanhare application inogona kutyaira kwepasi rose kukura kune rako bhizinesi. Kwete izvozvo chete, iwe unogona kuve neye mobile app kuvandudza kunoitwa zvine mutengo kumahombekombe futi!
Simudza Traffic uye Brand Kuzivisa - Inobatsira, inoshamisa nharembozha yekushandisa inoisa yako mhando kumusoro kwepfungwa. Mafoni ekushandisa anogona kutyaira omni-chiteshi kubatanidzwa, kunyangwe kutyaira traffic uye kutendeuka kudzokera kune yako webhu, ecommerce saiti, kana nzanga nzira.
Wedzera Kuteedzera Kwevatengi - nhare dzekushandisa dzakasimba zvakanyanya kupfuura nharembozha, nekuwana masevhisi enzvimbo, padhuze nekutaurirana kwemunda, accelerometers, makamera, mamaikorofoni, uye kunyange michina yebhaometri. Izvo zvinogona kupa mabhureki kuwanda kwekudyidzana nekubatana.
Yakareruka Vatengi Sevhisi - wedzera kuvimbika kwevatengi nekupa yakananga tambo yekutsigirwa kuburikidza neyako nharembozha. Kunyangwe iri yekudzvanya-kufona, kutaurirana, kugovana skrini, kubatsirwa sevhisi, kana kunyange vhidhiyo inopindirana, kambani yako inogona kusimudzira zvakanyanya kubatanidzwa kwevatengi.
Kuvandudza Revenue Potential - kusiyana nezvidhinha uye dhaka rinodhura, nharembozha inogara yakavhurika maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki, uye mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu pagore. Mafoni ekushandisa anokwanisa zvakare kuwana nharembozha, ichipa nzira yakapusa yekubvumidza kutenga.
Mushandi Kubatanidzwa - Indasitiri iri kukura iri kuvaka zvemukati mafomu evashandi ekutsvaga, zvinyorwa, uye kudyidzana kwemukati. Uku kutyaira hunyanzvi mumabhizimusi akakura nekuderedza kutaurirana uye kugadzirisa nzira dzekuvharira.
Zvakadii nezve Isu Kuputira Kumusoro!
Hapana munhu anogona kuramba kuti nharembozha dzinogona kusimbisa bhizinesi rako. Iwe une zano rekuti ushandise nhare?
Tags: brand awarenesskusangana kwevatengiMabatiro evatengiMushandi Kubatanidzwawedzera vatengi basewedzera marisimudza trafficMobile Anwendungnharembozha applicationnhare yekushandisa yekuvandudzaRevenue
Nitin ndiye mubatsiri -yekutanga weMobisoft Infotech, Dhijitari Solution Kambani. Mobisoft Infotech vanobatana nemabhizimusi eese saizi kuvaka, kugadzirisa uye kuyera zvigadzirwa pamapuratifomu anoshandisa kukanganisa tekinoroji uye kusanganisa dhizaini, mainjiniya uye hunyanzvi kuita kuti vatengi vedu vabudirire.